အမြန် လမ်း မိုင် တိုင် 262-6 မှာ သား အ မိ နှစ်ယောက် ကား ကို တားတော့ ရပ်ပေး လိုက် မိသောအခါ… – Na Pann San
2 8 .2.2020 ရ က်ေ န့ နေပြည်တော် ကနေ မန်းလေးကို အမြန်လမ်းကနေအသွား နတ်မောက်လ မ်းခွဲအကျော် မိုင်တိုင် 262-6 မှာ သားအမိ နှစ်ယောက် ကားကို တားတော့ ရပ်ပေးလိုက်ပြီး …. အကျိုးအကြောင်း‌မေးတော့ မန်းလေးကို သွားချင်တာ မန်းလေးက တဆင့် မြစ်ကြီးနားကို သွားဖို့ လမ်း စရိတ်ပြတ်လို့ ပျော်ဘွယ်ကနေ လမ်းလျှောက်လာတာလို့ပြောတယ် ….
ကားက လည်း လူ (4)ယောက်နဲ့ ပစ္စည်းတွေများနေလို့ ရေသန့်တဗူးမုန့်ရယ် လမ်းစရိတ် (20000) ပေးခဲ့ပြီး ကားကို ဆက်မောင်းခဲ့တယ် ….ကားမောင်းရင်း သူတို့သားအမိ လိုင်းကားတွေကို မတားရဲရင် ကလေးလည်းပါနေတော့… သားသမီးချင်း ကိုယ်ချင်းစာပြီး မိုင်တိုင် 266 ကနေ ကားကိုပြန်လှည့်ပြီး သွားခေါ်ခဲ့တယ် မိတ္ထီလာ ယာဉ်ရပ်နားကွင်းမှာ မန်းလေးသွားမဲ့ မန္တလာမင်းကားမှ ကားဆရာတွေကို မန်းလေးအထိ ခေါ်သွားပေးဖို့ ကားခ (4000) နဲ့အတူ သေချာပြောပြအပ်ပေးခဲ့တယ်…
သူတို့ သားအမိကို ကြည့်ပြီး တကယ့်ကို စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်….ဒီနေ့လည်း နေပြည်တော်ကနေ့ မုံရွာကို သွားတော့ သူတို့ သားအမိက အရင်နေ့က တွေခဲ့တဲ့ နေရာမှာပဲ ကားကို တားတယ် …. ဟို့တနေ့က ကိစ္စကို အကျိုးအကြောင်းမေးကြည့် ကားဆရာက မတင်သွားလို့ ဆိုင်ကယ် ကယ်ရီနဲ့ ဒီနေရာကို ပြန်လာတယ်လို့ ‌‌‌ ‌‌‌ပြောတယ် ….အဲ့ဒါနဲ့ ပေးထားတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ အခြားကားတွေနဲ မလိုက်ဘူးလား မေးတော့ ဝေ့လယ်ကြောင်ပတ်ဖြေပြီး ရှောင်ထွက်သွားတယ်….
အင်း……..ဒီလိုလူမျိုးတွေ‌ကြောင့် လမ်းမှာအမှန်တကယ် အခက်အခဲ ဖြစ်နေတဲ့သူတွေ အကူညီမဲ့မှာ စိုးမိတယ်……။ Credit Thar San Linn/Htet Aung
28.2.2020 ရ ကျေ န့ နပွေညျတျော ကနေ မနျးလေးကို အမွနျလမျးကနအေသှား နတျမောကျလ မျးခှဲအကြျော မိုငျတိုငျ 262-6 မှာ သားအမိ နှဈယောကျ ကားကို တားတော့ ရပျပေးလိုကျပွီး …. အကြိုးအကွောငျး‌မေးတော့ မနျးလေးကို သှားခငျြတာ မနျးလေးက တဆငျ့ မွဈကွီးနားကို သှားဖို့ လမျး စရိတျပွတျလို့ ပြျောဘှယျကနေ လမျးလြှောကျလာတာလို့ပွောတယျ ….
ကားက လညျး လူ (4)ယောကျနဲ့ ပစ်စညျးတှမြေားနလေို့ ရသေနျ့တဗူးမုနျ့ရယျ လမျးစရိတျ (20000) ပေးခဲ့ပွီး ကားကို ဆကျမောငျးခဲ့တယျ ….ကားမောငျးရငျး သူတို့သားအမိ လိုငျးကားတှကေို မတားရဲရငျ ကလေးလညျးပါနတေော့… သားသမီးခငျြး ကိုယျခငျြးစာပွီး မိုငျတိုငျ 266 ကနေ ကားကိုပွနျလှညျ့ပွီး သှားချေါခဲ့တယျ မိတ်ထီလာ ယာဉျရပျနားကှငျးမှာ မနျးလေးသှားမဲ့ မန်တလာမငျးကားမှ ကားဆရာတှကေို မနျးလေးအထိ ချေါသှားပေးဖို့ ကားခ (4000) နဲ့အတူ သခြောပွောပွအပျပေးခဲ့တယျ…
သူတို့ သားအမိကို ကွညျ့ပွီး တကယျ့ကို စိတျမကောငျးဖွဈမိတယျ….ဒီနလေ့ညျး နပွေညျတျောကနေ့ မုံရှာကို သှားတော့ သူတို့ သားအမိက အရငျနကေ့ တှခေဲ့တဲ့ နရောမှာပဲ ကားကို တားတယျ …. ဟို့တနကေ့ ကိစ်စကို အကြိုးအကွောငျးမေးကွညျ့ ကားဆရာက မတငျသှားလို့ ဆိုငျကယျ ကယျရီနဲ့ ဒီနရောကို ပွနျလာတယျလို့ ‌‌‌ ‌‌‌ပွောတယျ ….အဲ့ဒါနဲ့ ပေးထားတဲ့ ပိုကျဆံနဲ့ အခွားကားတှနေဲ မလိုကျဘူးလား မေးတော့ ဝလေ့ယျကွောငျပတျဖွပွေီး ရှောငျထှကျသှားတယျ….
အငျး……..ဒီလိုလူမြိုးတှေ‌ကွောငျ့ လမျးမှာအမှနျတကယျ အခကျအခဲ ဖွဈနတေဲ့သူတှေ အကူညီမဲ့မှာ စိုးမိတယျ……။ Credit Thar San Linn/Htet Aung
ဘိန်းစားချင်းအတူတူ တစ်လုံးပိုရှူချင် နေသော အနယ်နယ်အရပ်ရပ်က ပြည်တော်ပြန်များနှင့် ရန်ကုန်
ရောဂါစောင့်ကြည့် Quaratine အမိန့် ကို မနာခံတဲ့သူတွေ အတွက် တရုတ်အစိုး ရဲ့ ပြတ်သားတဲ့ ပြစ်ဒဏ်
ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံပေါင်း ( ၁၈၄ ) နိုင်ငံထဲတွင် ကိုဗစ် ကူးစက်ခံရပြီး နာလန်ထူသက်သာလာတဲ့ အညွှန်ကိန်း တွင် မြန်မာက အဆင့် ( ၂၀ ) နေရာ မှာ ရပ်တည်
အစိုးရထောက်ပံ့တဲ့ အစီအစဉ်မှ အခြေခံလူတန်းစားထဲမှာ ဘယ်လိုလူတွေပါသလဲ….